အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 200
ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – မြန်မာ့ဒုက္ခသည်အများ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည် … ဆိုလား
ကာတွန်းစောငို – မြန်မာ့ဒုက္ခသည်အများ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည် … ဆိုလား ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
အရှင်ပညာနန္ဒ။ မေ၊၂၈၊၂၀၁၂ အခု အိုးဘိုထောင်ထဲမှာ မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ သံဃာ (၂၃) ပါး ကျန်နေပါသေးတယ်။ (၁) ဘွဲ့တော် – ဦးဝိစာရိန္ဒ သက်တော် – ၄၀ခန့် နေရပ် – မင်းကုန်း၊ မဟာပရိတ္တိစာသင်တိုက်၊ ကျောက်ဆည်။ အဖမ်းခံရသည့်နေ့ – ၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၀၃ (၂၀၀၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅) စွပ်စွဲခံရသည့်ပုဒ်မ – ၁၄၉/၄၃၆/၂၉၅/၃၀၂/ အရေးပေါ် ၅/ည ချမှတ်ခံရသည်ထောင်ဒဏ် – နှစ်(၂၀) လက်ရှိနေရပ် – အိုးဘိုထောင် (ထောင်ကျခံနေရဆဲ) အောက်တိုဘာ ၁၉ရက် ၂၀၀၃ခု က ကျောက်ဆည်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကုလား-ဗမာ...
Ashin Pyinnyar Nanda – အရှင်ပညာနန္ဒ၏ ရုပ်သံခရီးစဉ် – မဲဆောက် မြ၀တီတံတားအနီးက ဒေါ်လှရှင် (၇၃)နှစ်
အရှင်ပညာနန္ဒ၏ ရုပ်သံခရီးစဉ် – မဲဆောက် မြ၀တီတံတားအနီးက ဒေါ်လှရှင် (၇၃)နှစ် (ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၁) က ရိုက်ကူးခဲ့သည်)။ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
U Zawana – သပိတ်မှောက်သံဃာတော် ဦးဇ၀န၏ မြန်မာ့အရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံများ
သပိတ်မှောက်သံဃာတော် ဦးဇ၀န၏ မြန်မာ့အရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံများ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ရွှေဝါရောင် ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် / မိုးမခရုပ်သံ၊ မေ ၂ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
> အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၄) ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န အရှင်ပညာနန္ဒ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၁ အသားညိုညို ဒေါင်ကောင်းကောင်း စကားပြောရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့အားရပါးရပြောလေ့ရှိတဲ့ ဆရာတော်အရှင်ဇ၀နကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်က ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာ မမျှော်လင့်ဘဲဆုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ သူထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန်က RFA အင်တာဗျူးတခုမှာ ရဟန်းပြန်ဝတ်ဘို့နဲ့ နေထိုင်စရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းကြားရလို့ ကူညီနိုင်ဘို့ ကြိုးစားဘူးတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကူညီခွင့်မရခဲ့ဘဲနယ်စပ်တနေရာမှာ ပြန်ဆုံခွင့်ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က သူ နယ်စပ်မှာနေထိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ နေရာထိုင်ခင်း အသားမကျသေးဘဲ ရုံးတရုံးမှာ ခေတ္တသီတင်းသုံးနေရတဲ့အချိန်ပါ။ နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေတွဲလုပ်တဲ့အခါကျမှ သူ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိလာရပါတယ်။ ရန်ကုန်ရွေပြည်သာ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကိုဦးစီးတည်ထောင်ပြီး ရဟန်းသာမဏေတွေကို စာချပေးရင်းတဘက်က ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ထိတွေ့ ပြီး အကူအညီ ပေး ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲသလိုနဲ့ ရှစ်လေးလုံးဖြစ်တော့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအရေးအခင်းမှာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂအနေနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်...
> ကွန်ကရစ်ရွာ၊ သံမဏိတံခါးကြားမှ မျက်ရည်မှတ်တမ်းများ အဘမမီလိုက်တဲ့ နောင်နှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်း အရှင်ဇဝန နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀ “အာဏာရှင်ဆိုတာကတော့ သူ့ကို ဆန့်ကျင်လာရင် မွေးကင်းစပဲဖြစ်ဖြစ် ရှစ်ဆယ်ကျော်၊ ကိုးဆယ်တွင်း အဘိုးအိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်သူလို သဘောထားမှာပဲ” ဆယ့်ခြောက်နှစ်တာကာလ နံရံလေးဘက်ကြား သော့အထပ်ထပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်သို့ ပို့ဆောင်လို့ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားခံရသူတယောက်အတွက် အသိအမြင်အသစ်များ အတွေ့အကြုံအသစ်များ ရရှိနိုင်တာကတော့ သမိုင်းဖြတ်သန်းမှု ကြီးမားတဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် နေထိုင်ခွင့်ရခြင်းပါပဲ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို သက်ရှိသမိုင်းစာအုပ်ကြီးလို့ ညွှန်းဆိုချင်တယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ ဖြစ်ရပ်တွေက တချို့ လည်း မှတ်တမ်းတွေ ရှိချင်ရှိမယ်။ တချို့လည်း မှတ်တမ်းတွေ မရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်...
> ရန်တကာအောင်တို့ အဖေ အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၀ အခန်း (၁) ဘဝ တလျှောက်လုံး ယုံကြည်ချက်အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ များစွာရှိမှာပါ။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထားသူတွေထဲက တွေ့ခဲ့ဖူးသူတယောက်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူဟာ ကျောင်းသားဘဝ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ယုံကြည်ချက်အတွက် တိုက်ပွဲတွေဝင်ရင်း အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ငရဲခန်းမျိုးစုံကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသူပါ။ သူ့ကိုစတွေ့စဉ်က ၁၉၉၄ ဇွန်လမှာ ဖြစ်တယ်။ ဦးဇင်းတို့ကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အင်းစိန်ထောင်ကနေ သာယာဝတီထောင် ပြောင်းရွှေ့ခံရတော့ ဦးဇင်းတို့က သီးသန့် အနောက်တိုက် သူက သီးသန့် အရှေ့တိုက်မှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ထောင်ထဲအနေကြာလာတော့ တယောက်အကြောင်း တယောက် သိလာကြတယ်။ တယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဟာ နောက်တယောက်အတွက် နည်းယူစရာတွေဖြစ်တယ်။ ဦးဇင်းတို့ထဲမှာ...
> သောကကို နင်းချေ အိပ်မက်တွေကို တည်ဆောက် အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၁၀ အဖြစ်အပျက်တွေကို အားလုံးတစုတည်း ပြောဖို့မစွမ်းပေမယ့် တခုစီကိုတော့ မှတ်မိသမျှ ပြောပြချင်မိတာကတော့ အမှန်ပါ။ လူရှင်တို့မြှုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်းအဖြစ် ဝိဂြိုဟ်ပြုကြပေမယ့် ဒီသင်္ချိုင်းထဲမှာ အားမာန်တွေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပုံ။ တုံး အ သွားအောင် သူတို့ ရက်ရက်စက်စက် ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ချွန်မြအောင်မိမိတို့ အားထုတ်ခဲ့တာတွေက စစ်အာဏာရှင်တို့ကို မင်းတို့ထင်ထားသလို ငါတို့တွေ ဖြစ်မသွားဘူးလို့ တုံ့ပြန်ပြလိုက်တာတွေပါ။ တကယ်ကတော့ လူသားမဆန်စွာဆိုတဲ့ စကားလုံးထက် ပိုပြောင်မြောက်တဲ့ စကားလုံးကို ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် သုံးပြသွားပါတယ်။ လူမဆန်စွာ၊ တိရစ္ဆာန်မဆန်စွာ၊ တိရစ္ဆာန်ထက် ဆိုးယုတ်စွာလို့ ဆရာကြီး သုံးပြသွားပါတယ်။ တကယ်က ရက်ပေါင်း ၅၈၀၀ ကျော်...
Page 200 of 201«1...197198199200201»